पाेखरा – Health Post Nepal
मेसिन पूर्ण क्षमतामा चलाउँदा पनि स्वाब पेन्डिङमा हुन्थे। घर जाने दिन कुर्दाकुर्दा कति क्वारेन्टाइनबाटै संक्रमित बने। पोखराको क्षेत्रीय अस्पतालको प्रयोगशालामा खटिएका प्राविधिकलाई पनि फुर्सद थिएन। बिहान झिसमिसेमा प्रयोगशाला आएर मध्यराति होटल फर्किन्थे। कोही घरै जान्थे। यो जेठ महिनातिरको कुरा हो।...
गोरखाका एक कोरोना संक्रमित पुरुषको मृत्यु भएको छ। कोरोना संक्रमण पुष्टि भएर गोरखा अस्पतालको आइसोलेसनमा राखिएका ४४ वर्षीय पुरुषको शनिबार बिहान ५ बजे मृत्यु भएको जिल्ला अस्पताल गोरखाले जनाएको छ। लामो समयदेखि सुगरका बिरामी ती पुरुषमा कडा खालको निमोनियाको...
कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि पोखराको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालको आइसोलेसनमा भर्ना भएका १७ संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन्। कोरोना परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ आएको प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गरेर १२ पुरुष र ५ महिला गरी १७ जनालाई शुक्रबार साँझ घर पठाइएको क्षेत्रीय...
झ्यालबाट बाहिर हेर्दा अस्पतालको पार्किङ देखिन्छ । पाँच दिनदेखि बाहिरी दुनियाँ देख्ने ठाउँ त्यही झ्यालमात्रै हो। त्यही दृश्य देख्न पनि उनले अरुको सहारा लिनुपर्छ। भविष्यमा आफ्नै जिन्दगीको दृश्य कस्तो हुने हो? सोच्न सकेका छैनन्। मात्रै कहालिएका छन् । गोरखाका...
पोखरामा राहत बाँड्ने विषय पहिलो दिनबाटै विवादित हुँदै आएको छ । राहतका लागि फारम भर्दा अनेकथरि कागजात चाहिने भनिएपछि महानगरको चर्को आलोचना भयो । पहिचान खुल्ने कागजात भए हुने भन्दै त्यो विवाद सल्टाइयो । फारम भर्न हुनेखाने पनि लाइन...
साथीहरू गाउँ पुगिसके। गाउँ पुगेकाहररू फोन गर्छन् अनि भन्छन्- ‘हामी त आइपुग्यौं। तिमीहरू कहिले आउँछौ?’ पश्चिमरुकुमको चौरजहारीका पहल केसी जवाफ दिन्छन्- ‘दुई चार दिनमा आइपुग्छु होला।’ तर, उनको यो ‘दुई-चार दिन’ धेरै बितिसके। कहिले हिँड्न पाउने? केही पत्तो छैन।...
कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले १ करोड ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। सोमबार बसेको ३८ औं मन्त्रिपरिषद् बैठकले ११ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिने गरी सो रकम विनियोजन गर्ने निर्णय...
बिहीबार दिउँसो फेवाताल किनारको बाराही घाटमा मानिसहरूको चहलपहल देखिन्थ्यो। उनीहरू सबै तालमा डुङ्गा चलाउने चालक रहेछन्। कोरोना भाइरसले गर्दा हातमुख जोड्ने बाटो बन्द हुँदा सबैको मन पिरोलिएको छ। कहिलेबाट नियमित काममा फर्कन पाइन्छ भन्ने उनीहरूलाई थाहा छैन। उनीहरूमध्ये कति...
विश्वभर महामारीका रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको परीक्षण सोमबारदेखि पोखराबाटै हुने भनिएको थियो । तर परीक्षणका लागि आवश्यक पिसिआर मेसिन पोखरा आइनपुग्दा सोमबारबाट सुरु हुन सकेन । मेसिन आज बिहानै पोखरा ल्याइएको छ । मेसिनसहित आवश्यक सबै कीट र विज्ञ...
पोखरा महानगरपालिकाले नगरभित्रका विपन्न र ज्यालादारी गर्ने परिवारलाई २ हजार बराबरको खाद्यान्न राहत दिने भएको छ। लकडाउन अवधि २५ चैतसम्म लम्बिएपछि महानगरले राहत बाँड्ने तयारी गरेको हो । महानगरपालिकाले करिब साढे २ करोड रुपैयाँको राहत कोष स्थापना गरेको र...
पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले सञ्चालन गरेको एमडी/एमएसको पुन: परीक्षामा ८ सय ७० डाक्टर सामेल भएका छन्। १ हजार ३७ जना डाक्टरले आवेदन फारम भरेकोमा ८ सय ७० डाक्टर सहभागी भएका हुन्। पुन: परीक्षामा १ सय ६७ जना डाक्टरले परीक्षा...